I-8.4 Umbhalo ophezulu-line-Geofumed
8.4 emininzi Text
Kwiimeko ezininzi, imidwebo ayifuni ngaphezu kweyodwa okanye amabini amagama achazayo. Kwezinye iimeko, nangona kunjalo, amanqaku afanelekileyo anokuba ngamacandelo amabini okanye ngaphezulu. Emva koko, ukusetyenziswa kwesicatshulwa kumgca akusebenzi ngokupheleleyo. Kunoko, sisebenzisa itekisi emininzi. Olu khetho lusetyenzwa ngqhosha elihambelanayo elingafumaneka kwifayile ethi "Umbhalo" we-"Annotate" ithebhu, kunye nakwiqela elithi "Izaziso" ze "Qala" ithebhu. Kuye, umzekelo, umyalelo odibeneyo, "i-Textom". Xa esebenzayo, umyalelo usicela ukuba senze kwisikrini iwindow eya kuhambisa imiyalezo emida emininzi, eyenza ukuba, ngokuthethileyo, indawo yenkqubo encinci yeprojekthi. Ingcamango eqinisekisiweyo xa sisebenzela ibar yomthamo esebenza ukufomathiza itekisi, leyo leyo, echazwe kwimisebenzi kunye nekhasi elixhomekeke kwi-Ribbon.
Ukusetyenziswa kwe "Umhleli wemigca emininzi" kulula kakhulu kwaye kufana nokushicilelwa kuyo nayiphina inqubo yeprojekthi, eyaziwayo, ngoko kuya kumfundi ukuba asebenzise ezi zixhobo. Ungakulibali ukuba ibha ye "Text Format" ineemenyu yokuhlahla kunye neenketho ezongezelelweyo. Kufuneka kuthiwa ukuba ukuhlela into ebhaliweyo yemigca emininzi sisebenzisa umyalelo ofanayo kunye neetekisi zomgca (iDdedic), sinokuphinda kabini uklikhele kwinto yombhalo, umahluko kukuba kulo mzekelo ivuliwe umhleli esikuyo apha, kunye nethebhu yenkcazo "Umhleli Wombhalo" kwi-ribbon. Okokugqibela, ukuba okubhaliweyo kwakho into emininzi iquka ngokwemihlathi eziliqela, kufuneka ubeke parameters zayo (ezifana indents, izithuba zemigca nezizathu), ngokusebenzisa ibhokisi yencoko yababini yegama elifanayo.
Post edlulileyo«Edlulileyo 8.3 iZimbo Text
Post Next 8.5 TablesOkulandelayo "